Soa fa misy sakafo manampy mandrindra ny rarin-tsaina sady manampy mampiakatra ny môraly amin’ny fotoan-tsarotra. Ireto avy izy ireo :
Ny tantely : Be vitamina B sy C ka afaka manala havizanana sy rarin-tsaina tokoa .
Ny zavoka : Be manezioma sy potasioma ka mampihena ny tebiteby sy ny hakizintinana.
Ny poavrao : Avo roa heny amin’ny vitamina C ao anaty voasarimakirana no hita ao anatiny sady mitondra « carotène » koa izy izay havadiky ny ao anaty ho lasa vitamina A. Mbola maro ankoatra izay ny otrikaina mahasoa ao anatiny ka ireo rehetra ireo no manampy manena ny havizanana.
Ny akondro : misy singa mampamoaka dopamine sy sérotonine ao anatiny. Ireo tsiry mpanentana ireo no manampy ny ati-doha handrindra ny rarin-tsaina sy ny fiasan’ny retsika. Akondro iray isan’andro dia ampy.
Ny chocolat : feno manezioma ny chocolat noir sady misy « caféine » sy « thébromine » ary tryptophane koa. Manaitaitra sady mampifantoka ireo singa ireo no manatsara ny toe-po koa. Chocolat noir singany 4 na “chocolat” mafana iray lovia jobo sotroina dia hitony vetivety ny rarin-tsaina .
Ny safran : Manatsara ny toe-po sady mampitony ity episy ity. Marina fa sarotra ny mampiasa azy ao anaty sakafo raha tsy hoe : lasopy na vary na paty. Azo hanaovana zava-pisotro kosa izy sotroina mialoha ny hatory.
Ny mofo feno na « pain complet » : Be « fibres » sady be manezioma sy vitamina B ity karazana mofo ity. Fantaro fa mampitohana ny rarin-tsaina indraindray ka manampy mandrindra izany ny “fibres”.
Ny rano : Tsy ampoizina loatra kanefa dia manampy mampihena ny rarin-tsaina tokoa ny rano raha be manezioma izy. Rano 1 litatra eo farafahakeliny isan’andro no sotroina.
Ny trondro matavy : Be omega-3 ny saumon sy ny thon sady be vitamina B2. Miaro ny sela amin’ny “radicaux libres” ireo no manatsara ny fiasan’ny retsika.
Ny epinara : Be manezioma ity anana ity ka manatsara ny fiasan’ny “système nerveux” koa. Mba tsy ho very ny otrikaina ao anatiny rehefa mahandro azy dia andrahoina amin’ny entona izy fa tsy ampangotrahina.
Araka izany, raha mahatsiaro ho mavesatry ny rarin-tsaina dia aza misalasala mihinana ireo karazan-tsakafo ireo